Maxkamada Ciidamada Oo Xukuno Adag ku Riday Rag ku Eedaysan Alshabaabnimo.(Sawiro) – Heemaal News Network
Maxkamada ciidamada qalabka sida ee dowlada Soomaaliya ayaa maanta Xukuno adag oo xabsi ah ku riday labo nin oo lagu eedeeyay in ay katirsan yihiin dagaalyahanada kooxda Al Shabaab.
Xafiiska xeer ilaalinta Maxkamada Ciidamada Qalabka sida ayaa ku soo eedeeysay Xuseen Daa’uud Cali iyo Cabdullaahi Maxamed Axmed in ay katirsanaayeen Al Shabaab una qaabilsanaayeen tuurista bambooyinka iyo kireynta guryaha.
Gaashaanle Sare Xasan Cali Nuur Shuute, guddoomiyaha Maxkamadda Darajada koowaad ee Ciidamada Qalabka Sida ayaa sheegay in labadan nin ku cadaatay dambiyada lagu soo eedeeyay ee ah in ay katirsanaayeen Al Shabaab ayna muteen xukunka lagu riday.
Maxkamada ciidamada qalabka sida ayaa Xuseen Daa’uud Cali ku riday 15-sano oo xabsi ciidan ah halka Cabdullaahi Maxamed Axmed isna maxkamada ku riday hal sano oo xabsi ciidan ah.
Labadan eedeesane ee xukunka lagu riday ayaa heesta fursad kale ee racfaan uga qaadan karaan xukunka lagu riday hadii aysan ku qanacsaneyn , waxaana loo gudbinayaa hadii ay racfaan qaataan Maxkamada sare ee Ciidamada.
Cabdiraxmaan Cabdishakur Oo Sheegay in Qaraxyadii ka Dhacay Muqdisho ay Fududeeyeen Ciidanka Xasilinta.
Siyaasiga Cabdiraxmaan C/shakuur Warsame ayaa sheegay in Qaraxyada magaalada Muqdisho ka dhacaya ay fududeeyan ciidamada ee u xilsaaran Sugida amniga caasimada. Cabdiraxmaan C/shakuur oo oo ka mid ah siyaasiyiinta sida xoogan u mucaaradsan dowlada ayaa […]
Dowlada Federalka Oo ku Hanjabtay Inay Tallaabo ka Qaadayso Dadka Dhoofiya Dhuxusha.
Wasaaradda ganacsiga iyo Warshaddaha dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ay tallaabo adag ka qaadi doonto ganacsatada ka dhoofisa dalka dhuxusha. Wasiirka Wasaaradda Ganacsiga xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa warbaahinta u sheegay in dowladda […]
Muqdisho:-Ciidamada Dowladda Oo Toogashoi ku Dilay Nin la Socday Gaari Meyd Siday.(Sawiro)
Ciidamo ka tirsan dowladda Federaalka ayaa maanta rasaas ku furay Gaari Ambulance ah oo siday Meyd, iyadoo rasaasta ka dhalatay meydka dadkii ka qeyb qaadatay duugta marxuumka dhintay. Sida ay sheegayaan wararka askari ka tirsan […]